Diyaarado dagaal oo duqeyn xoogan u geystay xarumo ay Al-shabaab ku leeyihiin gobolka J/dhexe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Diyaarado dagaal oo duqeyn xoogan u geystay xarumo ay Al-shabaab ku leeyihiin gobolka J/dhexe
Wararka naga soo gaaraya gobolka J/dhexe ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay duqeeyn xoogan ay u geysteen deegaanka lagu magacaabo War-dhoobley oo qiyaastii 45-km dhinaca galbeed kaga beegan degmada Bu’aale.
Diyaaradahaan oo ilaa iyo haatan la ogeyn meesha laga leeyahay ayaa dhowr gantaal ku riday saldhigyo ay Al-shabaab ku leeyihiin deegaanka War-dhoobley ee duuleedka degmada Bu’aale.
Duqeyntaan ayaa la sheegaya inay timid kadib markii Xarakada Al-shabaab ay fasaxeen isgaarsiintii ka jirtay gobolka J/dhexe, taas oo maalmihii ugu dambeysay ay halkaasi ka maqneed.
Sidoo kale, dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay halmar maqleen jug culus oo deegaanka ka dhacday, iyadoo ilaa iyo haatan aan la ogeyn qasaaraha ka dhashay duqeyntaas.
Dhinaca kale, dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa saakay gaaray goobta la duqeeyay, waxaana ay halkaasi ka sameeyeen baaritaano xoogan, inkastoo aan la ogeyn waxa baaritaankaasi kasoo baxay.
Sidoo kale, saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in la duqeeyay saldhigyo ku yaala deegaanka War-dhoobley oo ay Al-shabaab ku tababaraan ragga ay u adeegsadaan falka isqarxinta ah.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan duqeymaha ceynkaan oo kale ayaa gobolada dalka Soomaaliya ka geysta diyaaradaha laga leeyahay dalka Mareykanka, iyagoo beegsada xarumaha ay ku sugan yihiin Xarakada Al-shabaab.